Monde-Selection 2020 – Gold Award | Victory Myanmar Group Co., Ltd.
Mandalay Export Rum
Mandalay White Rum
Mandalay Coffee Liqueur
Mandalay Red Label
Monde-Selection 2020 – Gold Award
နိုင်ငံတကာထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေတံဆိပ်များဆွတ်ခူးခဲ့သော Mandalay Rum အတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။
၁၉၆၁ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ လူအများလေးစားကြသော ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအခြေစိုက် Monde Selection နိုင်ငံတကာထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးမှ ချီးမြှင့်သော ရွှေတံဆိပ်ဆုများကို Mandalay Rum မှ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ (၅၈) ကြိမ်မြောက် Monde Selection အဖွဲ့ကြီး၏ Spirits & Liqueurs ပြိုင်ပွဲ၊ Rum ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုပြိုင်ပွဲတွင် Mandalay Export Rum နှင့် Mandalay White Rum များက ရွှေတံဆိပ်ဆု (Gold Award) များကို အသီးသီးထိုက်တန်စွာဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည့်အတွက် Victory Myanmar Group မှ များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရွှေတံဆိပ်ဆုများကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ခြင်းအတွက် Mandalay Rum ကို အစဉ်တစိုက်အားပေးကြပါသော စားသုံးသူများနှင့် မိတ်ဖက်ကုန်သည်ကြီးများအားလုံးကိုလည်း Victory Myanmar Group မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဂုဏ်ယူနိုင်ရန်အတွက် အသိပေးလိုပါသည်။
ရှေ့ဆက်၍လည်း ကျွန်တော်တို့၏ Mandalay Rum ကို အစဉ်အမြဲအားပေးနေသူများအတွက် အရည်အသွေးနှင့် အရသာကိုဂရုတစိုက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီး ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ဆက်လက်အားပေးကြပါရန် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Mandalay RUM is awarded Gold Medal by Monde Selection which is the International Quality Institute was founded in Brussels, Belgium since 1961.
We, Victory Myanmar Group Co., Ltd. delighted that both Mandalay Export RUM and Mandalay White RUM are achieved Gold Awards at the RUM products of 58th Spirits & Liqueurs competition (2020) in Monde Selection.
We would like to inform to our Loyal Consumers and trade partners that We, Victory Myanmar Group would like our consumers and partners to be proud and spread our thanks to our Loyal Consumers and our trade partners of our MDY RUM.
We, VMG are spreading this good news with our commitment to produce Mandalay RUM products for our customers by sustaining product quality with taste. Therefore, kindly consuming our products with trust continuously.
No.(41/F), Yan Naing Swe Street, Thaketa Industrial Zone, Yangon, Myanmar.
+95-1-551121, 517417, 547418, 547360, 547361
© 2018-2022 Victory Myanmar Group. All Rights Reserved.